BBC Learning English - Course: English Expressions - Afaan Oromoo / Unit 1 / Session 19 / Activity 1
Yooyyaa! Qophii jechoota Afaan Inglizii keessatti of ibsuuf si fayyadan 'English Expressions' akkasumas kan haaraa ta'an akka bartuu si gargaarrutti baga nagana dhufte.Har'a, akkaata ibsannoowwan Afaan Ingilizii 'In black and white' gurraachaa fi adii jehdu ilaalla. Hiiknisaa maal sitti fakkaata?...Hinbarree? Tole, caqasi. Roobiifi Feeffee caqasi. Oduu maalii Rob Feeffeedhaaf kenna? Feeffeen ni amantii? Rob sirrii ta'uusaaa maaliif akkas amanee?
Rob maaliif akkas gammade? Eeyee, isaafi Feeffeedhaaf mindaan akka dabalamuufiif yaadeeti. Caqasiitii sirrii ta'usaa hubadhu.
Roob akka jedhutti, mindaan/kaffaltiin dabalamuunsaa dhugaadha 'in black and white'. 'Black' jechuun gurraacha; akkasumas 'white' jechuun adiidha. Odeeffannoon tokko 'in black and white' jira sababni jedhamuuf yeroo waanti sun barreefameera /maxxanfameera jechuudha; kunis qalama 'black' gurraachaan waraqaa 'white' adii' irratti. Ibsannoo kana kan fayyadamnu wayita wanti tokko siraqabeessaafi ykn mirkanaa'aa ta'uun waraqaarratti barreeffame ykn maxanfameedha. Yeroo heddu kontiraatota, affeerraa hojiifi waligaltee keessatti itti fayyadamna. Kanaafu, yoo waati tokko 'black and white' jiraate, waanti shakkisiisuufi mamsiisuu hinjiruu jechuudha.
Fakkeenya jalqabaa keessatti – affeerraan hojii 'in black and white' kennamee jiraachuun – mirkana ture jechuudha. Fakkeenya lammaffaa keessatti kan dubbate sun waliigaltichi hanga 'in black and white' 'adiifi gurraachaan' isa qaqabutti gamaduufis ta'e ayyaneefachuuf hinbarbaanne ture. Sababni isaas tarii dhugaa ta'u dhiisu waan danda'uuf ture. Kan dhumarra dubbatemmoo liqaa isaanii 'in black and white' 'gurrachaafi adiin' hanga harkatti galfatannitti hinamanne ture.
Odeeffannoon barbaachisaan muraasni 'in black and white' jira ture garuu Rob sirnaan hindubbisne ture! Atihoo? Odeeffannoo 'in black and white' yoom argachuu barbaachisa jettee yaadda? Maaliif barbaachisaa ta'e? Wanti tokko sirnaqabeessa akka ta'uuf 'in black and white' akka barreeffamuuf takkaa gaafattee beektaa? Barnoota dabalataa 'English Expressions'iin yeroo ittaanutti walitti deebina.
Wanti tokko barreeffameera yoo ta’e, yeroo baay’ee waantawwan faayida qabeessa of keessa qaba.
Ibsannoon kun waa’ee halluuwwanii miti.
Jecha akka ‘in writing’ waliin walfakkaatuun jalqaba.
Complete the sentence: It had taken a long time to get the business partners to agree to the new deal, so they wanted to get the contract ______ as soon as possible.